क्रमभङ्गः लघुकथा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २७ पुष २०७७, सोमबार २३:२१ मा प्रकाशित
“भगवान साताे गयाे !”
एक ठाउँमा धुप, दीप, नैबेद्य, भेटी, अबिर र अछेता देवताका लागि भाकिभाकी झाँक्री परतिर फाल्दैथियाे ।
अर्काे ठाउँमा खरानी र बेसार मिसिएकाे भूतकाे खान्की थियाे ।
–“लाै ! जा ! मन्साइदिएकाे छ । आफ्नाे थान्काेमा बस !” अग्रगमन कामिरहेकाे थियाे । पश्चगमन चाेला फेर्ने अनेक दाउ लगाएर बहाना बनाउँथ्याे ।
एकैछिनमा झाँक्री पुर्लुक्क ढल्याे । उसले भूत भगाउने मन्त्र भन्याे ।
कहिले कस्ले,कहिले कस्ले डस्ने पहलमानी चल्याे । यत्तिकैमा भूतले झाँक्रीलाई भन्याे । –“तँलाई खाइदिउँ ?
–“वल्लाे खाेला पल्लाे खाेला बादुरे छाेड्दे मलाई ।” उनीहरूकाे लडाइँ सुरूभयाे । कहिले कस्ले,कहिले कस्ले डस्ने पहलमानी चल्याे । यत्तिकैमा भूतले झाँक्रीलाई भन्याे । –“तँलाई खाइदिउँ ?” –“कसरी खाने हिम्मत छ, तँसँग !” –“अविश्वास प्रस्तावले !” दाेहरी चलिरहेकाे थियाे ।
टुप्लुक्क आएकाे धुपाैरेलाई झाँक्रीले भन्याे !
–“लाै ! लैजा यसलाई सडकमा !”
(“आधुनिक नेपाली लघुकथा समूह” सँगको सहकार्यमा हरेक हप्ता सोमबार लघुकथा प्रकाशन गर्ने गरेका छौ )